Amadoda, aneentshebe okanye engenazo iindevu? -Ingcebiso ngamadoda aSitayile | Amadoda aQinisekileyo
Ngeentshebe okanye ngaphandle kwentshebe? Sele imibuzo emininzi ngokungathandabuzekiyo iphakanyisiwe malunga nokubonakala kwendoda. Okwangoku iindevu yinxalenye enomtsalane yamadoda amaninzi kunye nobudala obahlukeneyo. Kodwa bacinga ntoni abafazi? Ngaba iindevu zivakala zilunge kangangokuba kufanelekile ukutshintsha inkangeleko yakho?
Inkqubo ayisebenzi kakhulu, kufuneka ukhule iindevu zakho Kwaye ndiyathemba ukuba yonke into iyawenza umlingo wayo. Ukuba ufumanisa ngokwenene ukuba unentshebe epheleleyo, kuya kuba kuhle ukuveza indlela onokuthi usebenzise amaqhinga esinokukunika kuwo esi sixhobo. Ukuba imalunga nokunika ivolumu kwaye siyinike olona nyango lusemagqabini, nathi sinakho konke Olona nyango lulungileyo lokuphucula indawo yobudoda.
1 Amadoda angcono ngeendevu okanye ngaphandle kweendevu?
2 Yintoni ekhethwa ngamadoda?
3 Zizathu zini ezikwenza ukholelwe ukuba kufuneka ube nentshebe?
4 Eyona nto intle kakhulu ijonge kulo nyaka
Amadoda angcono ngeendevu okanye ngaphandle kweendevu?
Ngokophando, kwabasetyhini bakhetha amadoda aneendevu. Kwaye ngaphandle kwamathandabuzo, isiphumo silungile, kangangokuba kunokubonwa ukuba kukho iliza elikhulu lefashoni ebusweni babaninzi bethu. Ayisamele kuphela into ebonakalayo, kodwa inokwenziwa ikholelwe ukuba umntu Ibonakalisa izakhono zokuzala nokuba ube sempilweni engcono. Kodwa lumkela oku, iindevu eziqaqadekileyo, ezinqabileyo, ezinde okanye ezingenamtsalane zinokunika isiphumo esahlukileyo.
Ngokubanzi, abafazi abangatshatanga nabatshatileyo abanamathuba okuzala ngokungathandabuzekiyo bakhetha amadoda aneenwelenokuba ikakhulu ebusweni. Imele Umntu obalaseleyo, onobukrwada kunye neengcambu ezinzulu ukuba nesibindi. Ngokwahlukileyo, amadoda achetyiweyo akazange anike umbono kunye nokubonwa.
Kubafazi indoda enentshebe ihlala ihleli unomtsalane ngakumbi kwaye uyindoda, Ngokuqinisekileyo kubonakala ngathi kukulawulwa kwesondo kwaye kukude. Iindevu zonyusa umzimba wobuso ngcono, ukongeza indoda enako fihla imilo ethile okanye ukungafezeki yobuso obuvumela ukukhula kweendevu zakhe. Kubonakala ngathi kwabasetyhini banamadoda akhaliphileyo kunye nabekekileyo.
Nangona kunjalo ayisiyonto inye iindevu ezinkulu, ezinde nezingahlambulukanga. Abasetyhini banokufumana ukoyika ngokubona nje olu hlobo lweendevu, kuba banokuyidibanisa nokungabikho kococeko.
Yintoni ekhethwa ngamadoda?
Amadoda akhetha ukuzama khulisa iindevu malunga neentsuku ezi-5 ukuya kwezi-10. Ke bafumanisa ukuba injani imbonakalo yobudoda. Yonke into iya kuxhomekeka kwinani leenwele zobuso, ukuba abakwazi ukubona ukubonakala ngokokuthanda kwabo kakuhle, kuya kufuneka bachebe ubuso babo ukuya kwinqanaba lokutshabalalisa.
Ukuba amadoda aneendevu ayaqatshelwa enomtsalane nabanini bobuhle bakhe obukhulu, baya kuyenza ibukeke ngobuqaqawuli bayo bonke. Ngale nto sinokukunika elona cebo lilungileyo ku "indlela yokufumana iindevu ezipheleleyo"Okanye"iingcebiso ezilungileyo zokukhathalela iindevu ". Ukuba into yakho kukukhathalela iindevu zakho kwaye uyimise, unayo apha zonke iingcebiso.
Zizathu zini ezikwenza ukholelwe ukuba kufuneka ube nentshebe?
Ukufaka iindevu sele kungumqondiso wee ugcine ukubonakala kwendoda ngakumbi. Amadoda ayayithanda kuba idala ukomelela okukhulu, inkangeleko yayo irhabaxa kwaye inesimilo, yiyo loo nto ijongeka inomtsalane. Ukuba uthelekisa namadoda achetyiweyo, uya kubona ukuba awunxibanga ibenza buhle ubuso babo kwaye babonakala bethobekile.
Indoda enentshebe idala imeko ephawuleka ngakumbi, Inika imbonakalo yokuba kwinqanaba eliphezulu ngakumbi ukuba igcinwe ingqindilili, inabantu abaninzi kwaye inakekelwa kakuhle. Banikwe amandla abo, lo ngumqondiso wokuvuthwa, kuba abafana banobuchule bokungabinazo iindevu ezomeleleyo.
Kwelinye icala, amadoda angenazo iindevu okanye abo banamadevu afumana i-ovations encinci, oko akuthethi ukuba abonyulwa, kodwa ngabafazi kwiindawo ezininzi zokuvota bakhetha amadoda aneendevu.
Eyona nto intle kakhulu ijonge kulo nyaka
I-stylists kule ndlela ijongeka ngayo imbonakalo yendalo ephawula ubuntu. Ayingombuzo wokuba iindevu zigqibelele, kodwa ukulula kwayo kuyabonakala. Izinwele zingakhuliswa kwiintsuku nje ezimbalwa emva koko ulwandlalo nokumakisha, makuqatshelwe ukuba ilungisiwe.
Enye indlela onokuyinxiba ngayo iindevu ngaphandle kwamacala, Isitayile esinokushiywa sikhulile kwaye sikhangeleke ngokwendalo. Kuya kufuneka ujongeke ngokulula, ngaphandle kokucheba intamo, kodwa oko kubonisa ukuba uthathe inkathalo yakho encinci yemihla ngemihla. Le ndevu igcweleyo iyacenga ebusweni enezikwere kunye neempawu eziphawulwe kakhulu.
Ungalibali ukuba sinobuso obuninzi babantu abadumileyo abakhethe ukunxiba ubuso babo 'ngeendevu okanye ngaphandle kwentshebe'. Sinabadlali abafana noLeonardo Di Caprio, Ashton Kutcher, Mario Casas kunye noMiguel Ángel Silvestre. Okanye abadlali bebhola ekhatywayo abanjengoDavid Beckham, uLeo Messi okanye unozinti uIker Casillas. Ukuba ufuna ukufunda okungakumbi malunga nesi sihloko, ungafunda "iintlobo ezahlukeneyo zeendevu".
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Amadoda, aneentshebe okanye engenazo iindevu?
Ukuba awundithandi, kutheni undijonge kangaka?